Al Sunna oo loga baxay balantii in 35 xildhibaan loogu daro B/ka Galmudug | SMC
Home WARARKA MAANTA Al Sunna oo loga baxay balantii in 35 xildhibaan loogu daro B/ka...
Al Sunna oo loga baxay balantii in 35 xildhibaan loogu daro B/ka Galmudug
Shirkii ugu danbeeyey ee Xasan Kheyre la yeeshay hogaanka Al Sunna ayuu ugu xaqiijiyay in dowlada Fedaraalka fulinayso labo qodob oo muhim u ahaa heshiiska ay la galeen Al Sunna Wajameeca. Laba qodob ayaa kala ahaa; 1) in AL Sunna Wajameeca la siin doono 35 Xildhibaan laga siin doono baalamaanka cusub iyo 2) in 11-ka qof ee loo magacabayo gudihga maamulaya doorashada, 6 ka mida ay keensanayaan Al Sunna Wajameeca.
Xasan Kheyre ayaa u muuqda mid balantaas uga baxay Al Sunna Wajameeca. Kheyre ayaa u sheegay saaxiibadiisa ku dhaw-dhaw in ayan marnaba macquul ahayn in doorashada Galmudug gacanta loo galiyo waxa uu ku tilmaamay “wadaado waalan”. Waxa kaloo uu intaas ku daray in ay horay lacag badan uga qaateen isaga iyaga oo balamo badana uga baxay.
Kheyre ayaa sheegay in aan baarlamaanka Galmudug waxba lagu kordhinaynin oo uu ahaan doono tarada hada uu yahay, laakiin uu isku dayayo in shan beelood laga codsan doono in ay min-hal xildhibaan oo ku dhow Al Sunna ay ku soo daraan xildhibaanada dowlada Fedaraalka ee beshaas soo gudbin doonto. Waa codsi kaliya hadii ay diidana ma jirto cid ku qasbi karta in ay Al Sunna caawiyaan.
Shanta beelood ee uu sheegay ayaa kala ah Beelah; waceysle, Ceyr, Dir, Mareexaan iyo Murusade. Hadii ay aqabalaan beelahaas ayaa waxa ay Al Sunna ka heli doontaa baarlamaankaan cusub tiro xildhibaana oo gaarya 5-7 Xildhibaan.
Dhanka kale Madaxweyne Farmaajo ayaa ku adkeeystay in la oofiyo heshiiskii Al Sunna ee ahaa in 35 xildhibaan dheeraada loogu kordhiyo baarlamaanka halka Kheyre oo wato mushraxa lagu sheegay in uu yahay Qoor Qoor uu diidan yahay in fursad loo siiyo AL Sunna in ay ayagu soo magacaawdaan xildhibaano u gaar ah.
Qaar ka mida Musharaxiinta rajada ka qaba in loo doorto jagada madaxweynaha oo ka soo jeeda xisbiyada siyaasadeed ayaa ayagana ka biyo diideen in Al Sunna la siiyo kuraas dheeraad ah oo saamyn ku yeelan karto natiijada doorashada. Xisbiyada ka horyimid kordhintaas ayaa wax ka mida Xisbiga Wadajir iyo Xisbiga uu bogaamiyo Xasan Shiikh oo ayagu wata musharax Cabdiraxman Odowaa.
Al Sunna ayaa meel cidla ah ku soo dhacay: Ciidankii waa lagala wareegay, magalaadii waa lagala wareegay, dadkii deegaanka waa lagu diray, xildhibaanadii loo balqan qaadayna in la siiyana waa looga baxay. Dhanka kale dadkii la soo jihaaday oo ay u balan qaadeen jagooinka meel cidla ah ayaa looga tagay halka saraakiishoodiina laga keexaystay.
Wali lama oga tilaabaada ay qaadi karaan ama qaadi doonaan Al Sunna Wajameeca marka lagu kala baxo doorashada mudo aan bil ka badnaynin.
Previous articleRa’iisal Wasaare Kheyre oo ku sii jeeda magaalada Marka
Next articleHowl-gallada CXDS ee ka socda Gobolka Sh/hoose oo lagu baahinayo Sh/dhexe